Saturday July 14, 2018 - 08:24:22 in Wararka by Super Admin
Kulanka oo u dhaxeeyay Hoggaanka Xarakada Al Shabaab iyo Beesha Xawaadle ayaa yimid kadib dagaal khasaara badan dhaliyay oo ciidamada Xarakada iyo Maleeshiyaad ay dowladaha Jabuuti iyo Itoobiya soo abaabuleen uu ka dhacay deegaanka Xalfooleey.
Maleeshiyaad shaatiga Beesha Xawaadle watay ayaa isku dayay in ay carqaladeeyaan ku dhaqanka shareecada islaamka ee deegaanno katirsan Hiiraan iyo Sh/dhexe arrinkaas oo si adag ay uga jawaabeen ciidamada wilaayaatka islaamiga kadibna waxaa dhacay kulan looga arrinsanayay xaaladaha dadka deegaanka.
Shirka ballaaran ee ka dhacay deegaanka Tardo oo ay ku sugnaayeen waxgaradka beesha Xawaadle iyo Mas'uuliyiinta Al Shabaab waxaa kasoo baxay heshiis dhowr qodob ka kooban oo durbadiiba fulintiisa ay bilaabatay.
Jufooyinka Beesha Xawaadle ee Heshiiska galay ayaa kala ah:-
1- Yeber madaxweyne
Sheekh Guuleed Abuu Nabdhaan oo ah waaliga Hiiraan balse wakiil ka haa Sheekh Abuu Cubeyda Amiirka Shabaabul Mujaahidiin ayaa madasha kulanka khudbad ka jeediyay wuxuuna sheegay in Al Shabaab ay aamineen beesha Xawaadle ayna ka go'antahay in dhankooda dhaqan geliyeen heshiiska.
Salaadiinta Beesha Xawaadle oo iyana goobta ka hadlay waxay sheegeen in ay ka qoomameynayaan dagaalka ay maleeshiyaadka beeshooda kasoo jeeda lagaleen Shabaabul Mujaahidiin sidaas daraadeed ay diyaar u yihiin dhaqan gelinta heshiiskan dhaxalgalka ah islamarkaana ay ka qeyb qaadanayaan halganka jihaadka ee dalka Soomaaliya ka socda.
Qodobada lagu heshiiyay ayaa ah:-
1-beeshu waxay ballan qaadday u hoggaansamidda ku dhaqanka shareecada islaamka sida zakada oo lagu wareejinayo wilaayada islaamiga ah.
2- Beeshu waxay ballan qaaday in deegaannada ay degto ay dadka muslimiinta ah ku nabad gelinayso oo nabad gelyo lagu dhax joogayo
3- Beeshu waxay ballan qaaday in ay bixinayso wixii ay dhib geysatay sida dadkii ladilay
4- Beeshu waxay ballan qaaday in maleeshiyaadka loo yaqaan Macaawisleey ay ka saarayso deegaannada beeshu degto midkii Towbad keeno mooyee
5-Ciiddii soo dhoweysay maleeshiyaadkaas iyo ciidamada gaalada maalkooda waa lala wareegayaa
6-Beesha xawaadle waxay ballan qaadday in ay Baraa'o ka qaadatay ciidamada shisheeye iyo maleeshiyaadka la shaqeeya
7-Beeshu waxay ballan qaadday in dhulkeeda aysan cadowga alle usoo mareyn ee isugu jiro gaalada asalka ah iyo kuwa murtadiinta ah ee la shaqeeya
8-Beeshay waxay qaadatay in ay Towbo ugu yeerto dadka ka dhashay ee cadawga la shaqeeya
9-Beeshu waxay ballan qaaday in ay sameysanayso Nabadoonno ku hoggaamiyo ku dhaqanka shareecada islaamka
10-Waxay Xarakada Al Shabaab cafis ufidisay Towbadna uqabatay dadkii dagaalka ka qeyb galay ee beesha ka dhashay
Fiiro Gaar ah: Waxaa lafarayaa dhammaan cidda uu khuseeyo Heshiiskan in ay dhaqan geliso Wabillaahi Towfiiq
Halkan ka degso Kalimadihii laga Jeediyay Madasha Heshiiska ama Hoos ka dhageyso.